Afka suubban iyo dhaqanka dilloon ee R/W Khayre kee ku dayasho mudan? - Caasimada Online
Home Warar Afka suubban iyo dhaqanka dilloon ee R/W Khayre kee ku dayasho mudan?
Afka suubban iyo dhaqanka dilloon ee R/W Khayre kee ku dayasho mudan?
Sidii loo magacaabay RW Khayre, waxaan safka hore kaga jiray, lana mid ahaa malaayiinta Soomaaliyeed ee hanka weyn uu hayey Ra’iisul Wasaaraha. Dadka waxaan dheerayn makrafoon oo kaliya!
Sida ay qirayaan siyaasiyiin badan oo Soomaaliyeed, RW Khayre waxa uu nasiib u yeeshay in uu si mug weyn ugu madaxbannaanaado shaqada xafiiskiisa, oo inta la ogyahay sidii xukuumadihii ka horreeyey uusan marna xagal-daacin joogto ah kala kulmin xafiiska Madaxweynaha.
Warbixintan kooban hadafkeedu ma aha in aan ku soo bandhigno khilaafka ka dhex aloosan madaxa iyo maanka RW Khayre, laakiin waa in aan tilmaanno sida ay isku keeni la’yihiin hadalada suubban ee RW Khayre iyo dhaqankiisa silloon, kaas oo si joogto ah u beeniya hadalkiisii wanaagsanaa ee uu daqiiqado kahor ku hadaaqay.
Tusaale koobaya khilaafka ka dhex aloosan madaxa iyo maanka RW Khayre waxaa inoo ku filan kii shalay iyo booqashada Ra’iisul Wasaare Khayre uu booqday “Xarunta Akaadeemiyada Dhaqanka iyo Suugaanta Soomaaliyeed.”
Daciifnimada Soomaaliya maanta ka jirta, marka laga tago tan siyaasadda, tan ugu bidhaan dheer waa dhaawaca soo gaaray afka, dhaqanka, iyo suugaanta Soomaaliyeed. Hadaba ma tilmaan ka fiican baa jirta tusaalaha maanta ee Khayre, kaas oo RW Khayre uu si suubban afka ugu salaaxay xaalka maanta ee afka Soomaaliga, oo uu hadana si wayn ugu dheeraaday ahmiyadda uu leeyhay dhaqankeenu, asaga oo “tilmaamay in xukuumadiisu ay si wayn u adeegsato Af-Soomaaliga xiliyadda shaqada lagu guda jiro.”
Intaas RW Khayre kuma uu joojin e waxa uu ku daray, “haddii aad rabto in dadkaagu ku noolaadaan Soomaalida aad jeceshahay waa in aad ku faantaa waxa tahay, waa in aad ku faantaa dhaqankaaga iyo dawladdaada.”
Qoraal-xumida war-saxaafadeedka marka la iska indhotiro, in kasta oo ahmiyaduba ahayd in afka, dhaqanka iyo sugaanta la ilaaliyo, hadana RW Khayre waxa uu jeebka gashaday oo aqbalay shahaado sharaf ku qoran afka Ingiriiska, cinwaankeeduna ahaa “Leadership Award.”
Bal aan isweydiino e, hooyada arigu ka ammoonyahay, waa 10 kii neef ee tirada uga haray, welina abaartii SIMA ay meel kasta oo jirkeeda kamid ah ka dhawaaqayso, calallo daldaloolana dhar u yihiin, arigana ku soo aroorisay “Khayraa khayr soo wada ee sanqalooy socodka boobsii,” ma “Leadership Award” bay ari danbe ku aroorin kartaa! Wiilka 19 jirka ah ee Wajibuug (Facebook) har iyo habeen ka difaacaa se ma aqbali karaa ismandhaafka joogtada noqday ee madaxa iyo maanka RW Khayre?
Aan mar kale isweydiino e, maxaa loola danlahaa shahaado sharafta afka Ingiriiska ku qoran ee la guddoonsiiyey RW Khayre, loona rabay in lagu hormariyo afka, dhaqanka iyo suugaanta Soomaalida? Aan ku darsano e, RW Khayre ma akhriyey magaca shahaadada ku qoran, una qornaa Hassan Ali Kheyre? Mise macno weyn lama leh sida magaca loo qoraa, oo waa sida siyaasadda RW Khayre iyo “la jiifiyaana bannaan, la joojiyaana bannaan?”
Iskeenimayso rajada shacabka Soomaaliyeed ka qabaan Xukuumadda Khayre iyo dhaqankiisa silloon, dadkuna duunyo ma aha, oo waa dad kala garan kara farqiga u dhexeeya af suubban iyo dhaqan silloon. Saas oo ay tahay, haddii uu RW Khayre rajo ka leeyahay in uu dalka sii xukumo waa muhiim in dagaalka ka dhex aloosan madaxiisa iyo maankiisa uu Ra’iisul Wasaaruhu hal dhan isku raaciyo.
Rabboow dhanka suubban!